कोशी उच्च बाँध नेपालको लागी कि भारतको लागि ? हेर्नुहोस पुरा विवरण – च्यालेन्ज नेपाल
सम्झौताअनुरूप नेपालको सिमानाभित्र सम्पूर्ण संरचना पर्ने गरी सन् १९६२ मा कोशी ब्यारेजको निर्माण सम्पन्न गरियो । त्यसयता भारतले कोशी ब्यारेजबाट करिब ९ लाख ७० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइका लागि पानी पुर्‍याउँदै आएको छ । कोशी सम्झौता १९९ वर्षका लागि गरिएको भए पनि सम्झौताअनुरूप बनेको कोशी ब्यारेजका भौतिक संरचनाहरूको आयु सकिइसकेको हुनाले त्यसबाट प्राप्त भइरहेको लाभ गुम्ने र कोशी पुनः बिहारको दुःखका रूपमा परिणत हुने भारतीय चिन्ता छ ।
यसो हुन नदिनका लागि कोशी उच्च बाँध नै दीर्घकालीन उपाय हो भन्ने भारतको बुझाइ रहँदै आएको छ । यस लेखमा हामी कोशीको विगतलाई केलाउँदै भविष्यका लागि भनिएको कोशी उच्च बाँधका बारेमा चर्चा गर्दै छौं ।
भारतमा ब्रिटिसको पालादेखि नै कोशी उच्च बाँधको चर्चा भए पनि सन् १९८१ मा भारतको केन्द्रीय जल आयोगले बाँधको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यसको एक दशकपछि डिसेम्बर १९९१ मा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा कोशी उच्च बाँधको विस्तृत अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो ।
सोही सहमतिबमोजिम सप्तकोशी उच्च बाँधसम्बन्धी नेपाल–भारतका विज्ञहरूको संयुक्त समिति बन्यो, जसको पहिलो बैठक फेब्रुअरी १९९२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो । सन् १९९२ देखि २०१९ सम्म यस संयुक्त समितिका सोह्र बैठक भइसकेका छन्, जसमध्ये छवटा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएका हुन् ।
उक्त समितिको पहिलो बैठकमा भारतका तर्फबाट गंगा बाढी नियन्त्रण आयोगले टोलीको नेतृत्व गरेको थियो भने, त्यसपछिका सम्पूर्ण बैठकको नेतृत्व भारतको केन्द्रीय जल आयोगले गर्दै आएको छ । उच्च बाँध बाढी नियन्त्रणका लागि मात्र नभई समग्र जलस्रोतको विकासका लागि हो भन्ने बुझेरै भारतले यसो गरेको हुनुपर्छ ।
यता हामीकहाँ भने संयुक्त बैठकको नेतृत्व जलस्रोत मन्त्रालयबाट सुरुआत भए पनि क्रमशः जल तथा ऊर्जा आयोग हुँदै पछिल्ला बैठकहरू विद्युत् विकास विभागले गर्दै आएको छ । उपर्युक्त सोह्र बैठकमध्ये एघारवटा यही विभागको नेतृत्वमा भएका हुन् । भारतसँग समग्र जलस्रोतका विषयमा छलफलका लागि जल तथा ऊर्जा आयोगको उद्देश्य र कार्यादेश सर्वोत्तम भए पनि विद्युत् विकास विभागलाई यसको नेतृत्व दिनुले नेपालको मुख्य चाहना र प्राथमिकता नै जलविद्युत् उत्पादन हो भन्ने भान हुन जान्छ ।
यसरी हेर्दा भारतले जलस्रोतको अलि ठूलो आँखाले हेरेको यस परियोजनामा विद्युत्को नजरबाट मात्र हेरिनुले नेपालको नजर भने कमजोर त परेको छैन प्रश्न उब्जेको छ ।
काठमाडौंमा सम्पन्न सन् १९९७ को दोस्रो संयुक्त बैठकमा कोशी उच्च बाँधको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको तयारी एवं नेपाल–भारत संयुक्त बैठकको सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले बेहोर्ने तय भएको थियो । सन् २००१ मा कोशी उच्च बाँधको विस्तृत अध्ययनका लागि विराटनगरमा संयुक्त परियोजना कार्यालय खोल्ने तय गरियो । सन् २००३ को पाँचौं बैठकमा सो संयुक्त कार्यालय खोल्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने सहमति भयो ।
उक्त बैठकमा नेपालका तर्फबाट संयुक्त कार्यालयमा खटिइने नेपाली कर्मचारीहरूका विभिन्न भत्ताको दरसमेत भारतले प्रस्ताव गर्‍यो । प्रस्तावित भत्तादर कम भएको कुरासमेत नेपाली टोलीले सोही बैठकमा उठाएको देखिन्छ । यसरी संयुक्त कार्यालय स्थापना गर्दा नेपाली टोलीको भत्ता र सुविधाको व्यवस्था नेपाल सरकारले आफैं गर्नुपर्ने होइन र ? भारतले नै गरेको यस्तो व्यवस्थाले अध्ययनको निष्पक्षतामै ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ । नेपालका तर्फबाट खटिइजाने सरकारी कर्मचारीलाई भत्ता र सुविधा दिएर भारतले तिनलाई नेपालमै ‘भारतीय लाहुरे’ बनाई प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । यसले गर्दा नेपाल सरकारबाट खटिइजाने कर्मचारीको देशप्रतिको वफादारी पनि संकटमा परेको छ ।
विराटनगरस्थित संयुक्त परियोजना कार्यालयको वेबपेजअनुसार, कोशीमा २६९ मिटर अग्लो बाँध प्रस्ताव गरिएको छ, जसमा कुल ३,३०० मेगावाट विद्युत् (वार्षिक १७६०.७ करोड युनिट) उत्पादन गरिनेछ । यस आयोजनाबाट सिञ्चित हुने कुल १५.९९ लाख हेक्टर जमिनमध्ये ५.४६ लाख हेक्टर नेपालमा र बाँकी १०.५३ लाख हेक्टर भारतमा हुनेछ । यसका साथै बाढी नियन्त्रण र जल यातायातका कुराहरूसमेत उल्लेख गरिएका छन् । नेपालको चतरादेखि भारतको कुरसेलासम्म कोशीको पानी प्रयोग गरेर जल यातायात सञ्चालन गर्न सकिने भनिएको छ ।
कुरसेलामा कोशी नदी भारतको गंगा नदीसँग मिसिन्छ, जहाँबाट जलमार्ग भारतले सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसरी कोशी उच्च बाँधका फाइदाहरूका बारेमा चर्चा भए पनि यसबाट हुने वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावका बारेमा थोरै मात्र बहस हुने गरेको देखिन्छ । कोशी नदी उपत्यकामा रहेको करिब १९,४२० हेक्टर जमिन डुबान हुँदा कति नेपाली विस्थापित हुन्छन्, कति कृषियोग्य र वन क्षेत्र सदाका लागि नेपालले गुमाउँछन् भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी नै छ ।
कोशी उच्च बाँध नेपाल र नेपालीको चाहना र आवश्यकताभन्दा पनि भारतको बाध्यता हो, जसलाई उसले कुनै पनि हालतमा बनाउन चाहेको छ । नेपालको अस्थिर राजनीति एवं कमजोर संस्थागत स्मृतिको फाइदा उठाउँदै भारतले विगतमा जलस्रोतसम्बन्धी विभिन्न सन्धि–सम्झौता आफूअनुकूल हुने गरी गर्दै आएको छ, जसले गर्दा यी सम्झौताहरू विवादित छन् । आफ्नै अग्रसरतामा भएका सम्झौताहरू पनि भारतले इमानदारीपूवर्क पालना गरेको छैन । यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा हालै नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकलाई लिन सकिन्छ । उक्त बैठकमा भारतले चाँदनी–दोधाराको सिँचाइका लागि पानी दिन सहमत भयो भनेर नेपालको ठूलै उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरी समाचारहरू प्रकाशन भए ।
तर यहाँ के बुझ्न जरुरी छ भने, सो क्षेत्रका लागि पानी दिने प्रावधान पच्चीस वर्षअगाडि सन् १९९६ मा महाकाली सम्झौतामा राखिएको छ । तर आजसम्म पनि नेपालले पानी पाएको छैन, न त टनकपुरबाट न चाँदनी–दोधाराका लागि नै । यसरी पच्चीस वर्षसम्म पनि भारतले पानी नदिँदा सो अवधिको क्षतिपूर्ति नेपालले दाबी गर्नुपर्ने होइन र ? यस्तो विश्वासको खडेरीमा परेको भारतसँगको जलस्रोत सम्बन्धमा कोशी उच्च बाँध हामीले कसका लागि र किन अगाडि बढाउने ?
Tags: #challengenepal #challengeonlinetv Challenge nepal challenge online tv Gopal pakhrin GOPAL TAMANG gopalpakhrin GOPALTAMANG कोशी उच्च बाँध नेपालको लागी कि भारतको लागि ? च्यालेन्ज अन्लाइन टिभी च्यालेन्ज नेपाल च्यालेन्जअन्लाइनटिभी च्यालेन्जनेपाल
Previous डा: बाबुराम भट्टराईको क’डा तर्क लाखौंले बलि’दानी दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ :
Next मानाङ्गमा लागेको आ’गो अझ भयं’कार ड’र’लाग्दो बन्दै